Kungakhathaliseki ukuthi uyinkampani ephethe ilungelo lobunikazi noma inkampani ethatha umkhiqizo usuka kumqondo uyiswe ekufezekeni, ukunemba nokunemba kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zokusebenza Zokukhiqiza Izisetshenziswa Zoqobo. Ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo wokugcina ithuthukisa isikhathi sokumaketha nokwaneliseka komsebenzisi wokugcina, okuzuzisa ...
Imboni kawoyela negesi isekela umphakathi wanamuhla. Imikhiqizo yayo ihlinzeka ngamandla kumajeneretha kagesi, ezindlini zokushisa, futhi inikeza uphethiloli wezimoto nezindiza ezithwala izimpahla nabantu emhlabeni wonke. Izinto ezisetshenziswayo ukukha, ukucwenga, kanye nokuthutha lezi zinto eziwuketshezi namagesi kumele zibhekane nokusebenza kanzima...
Inzuzo Yokusebenza Kokucubungula Amakhemikhali Njengoba izindawo zokukhiqiza amakhemikhali zisebenza ubusuku nemini, izindawo zokusebenza zihlala zithintana nezinto ezimanzi, ze-caustic, abrasive, kanye ne-asidi. Ngezinqubo ezithile, kufanele zimelane namazinga okushisa ashisayo noma abandayo futhi kube lula...